आदिवासी जनजाति, मधेश, दलित लगायतको पहिचानको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने संविधानको धारा २७४ शंसोधन गर्नुपर्छ । पहिचानलाई नामेट पार्ने काम दुई तिहाई सरकारले अनुमोदन गरेको संविधानमा उल्लेख छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराक ले भने, धारा २७४ संशोधन हुँदा संविधान नै फेरिने होइन । हाम्रो माग भनेको केवल प्रदेशको पनि बहुमत चाहिने भन्ने मात्र हटाउने हो ।
आदिवासी जनजाति, मधेश, दलित, महिला लगायतको माग सम्बोधन नगरी अनुमोदित संविधानप्रति हाम्रो असहमति दर्ज नै छ । उनले भने– कतिपय पहिचानबादीहरुले विभिन्न पार्टीमा रहेर संघर्ष गर्दा पनि हुन्छ, त्यो गलत हो । हाम्रो माग पूरा हुन, छुट्टै पार्टी र झण्डा चाहिन्छ ।
अर्को प्रसंगमा नेता लिङदेन थप्छन–‘संघीयतामा प्रान्त तोकिंदा अधिकतम मातृभाषामाथि आक्रमण भएको छ । मातृभाषा र पहिचानसहितको १०+१ को अवधारणामा जानैपर्छ । ताकि उनीहरुले संघीयतालाई परिभाषित गर्दा केन्द्र र सात वटै प्रान्तको पनि बहुमत हुनुपर्छ भनेका छन् ।’
पहिचानको मुद्धा स्थापित गर्न आर्थिक पाटोलाई केलाउदै उनी भन्छन, गाउँघरमा बसेका आमाबुबा, दाजुभाई, दिदीबहिनीले हामीलाई नैतिक समर्थन मात्रै गर्ने हो, त्यतिले पुग्दैन, उनले जोड दिए । आन्दोलनमा आत्मनिर्भर सक्षम युवा नेता कार्यकर्ताको संलग्नता हुनैपर्छ । ताकि अहिले भइरहेको आन्दोलनमा वान मेन आर्मीको रुपमा केही अमुक बुद्धिजिवीहरुले पहिचानको ठेक्का लिए जसरी प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसले पहिचान आउदैन ।
पहिचान पक्षधरबीच आन्दोलनको उभार आउदै गर्दा लाग्ने चर्का नाराहरु समय क्रमसँगै उपलब्धिमुलक नभईकन हाइज्याक पनि भएका छन् । उनले थपे, २०६२/६३ पछिको स्थापित मञ्चले उठाएका जायज मागहरु संसदवादी दलले आफू खुशी चुनावी नारा बनाए । त्यसपछि एमाले, कांग्रेस, माओवादीले एकाध सांसद जिताए । तर संविधान लेखनमा भने आन्दोलनका मागलाई इन्कार गरे । त्यसैकारण हामीले संविधान अपूर्ण छ भन्दै आएका छौं । हामी आन्दोलनमै छौं ।
तपाईको पार्टीले संघीय मञ्चहरु निर्माण गर्दै गर्ने क्रममा हिन्दु वर्णाश्रमभित्रैका दलित भनिने समुदायलाई कसरी समेट्नु भएको छ ? यी प्रश्नको जवाफ दिदै लिङदेन भन्छन, नेपालको जनसंख्याको हिसाबमा १३.५ प्रतिशत दलित शिल्पीहरु रहेका छन् । उनीहरुलाई ब्रम्हाणबादी राज्यसत्ताले भोट बैंकका रुपमा मात्रै दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यो तितो सत्यलाई आत्मासात गर्दै हामीले दलित शिल्पी मञ्च गठन गरी गैर भौगोलिक प्रदेशको अभियान चलाएका छौं । उनी थप्छन्, तामाङ, राई, लिम्बु, मगर आदिको आदिम थलो यद्यपि छदैछ । तापनि शिल्पीहरुको निश्चित भूगोल छैन, उनीहरु देशैभरी फैलिएर रहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले समेटेका छौं ।
अभियानलाई समर्थन गर्नेहरुको किपट थातथलोलाई संवैधानिक रुपमा नामाकरण गर्न त मानेन नि ? भन्ने प्रश्नमा पहिचानजनित भूगोलका नामहरु जस्तै तामाङसालिङ, लिम्बुवान, खम्बुवान, मधेशलाई संविधानले नमाने पनि यी आदिमकालदेखि रहिआएका नाम हुन्, यसको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ । उनले भने– कुनै एटम बम, परमाणुले पनि ध्वस्त गर्न सक्दैन । यसलाई मेटाउन खोजिएको नै अहिले राज्यसत्ता हो ।
धेरथोर रुपमा अरु जातिले पनि मातृभाषालाई जोगाइराखेका छन्, यद्यपि बहुसंख्यक तामाङले मातृभाषा जोगाइराख्नु नै ठुलो उपलब्धि हो, त्यसैले तामाङसालिङको आन्दोलन निर्णायक हुन्छ र उहाँहरुको आफ्नै झण्डा छ, त्यसैले जाति पहिचानको नायक भएर उठछन् र उठ्नुपर्छ ।